ပြည်သူအသက်ကယ်သူမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စွမ်းရည်သတ္တိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုများချီးမြှင့်ခံ? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ မေ ၅-ရေတွင်းထဲ ပြုတ်ကျသူကို ဆင်းကယ်ခဲ့သည့် မီးသတ်သမားနှစ်ဦးနှင့် အောင်စိုးမိုး ကျော်ရေယာဉ်နစ်မြုပ်မှုတွင် ကူညီ ကယ်ဆယ်ခဲ့သည့် မီးသတ်သမား ခြောက်ဦးတို့အားဂုဏ်ထူးဆောင် ဂုဏ်ပြုတံဆိပ် များချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မေ ၅ ရက် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ အုတ်ပုံဆိပ်လမ်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံမီး သတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ စစ်ရေးပြကွင်း ၌ ပြုလုပ်သည့် (၇၂) နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့နေ့ အခမ်း အနားတွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ် ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေက စွမ်းရည်သတ္တိ ဆိုင်ရာဂုဏ်ထူးဆောင်ရဲဗလတံ ဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရသူ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦး၊ စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာရဲသူရိန် တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခံရသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့် ရဲကျော်သူတံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရသူတပ် ဖွဲ့ဝင်ငါးဦးတို့ကို ဆုတံဆိပ်ပေး အပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်၊ စီမံရေးရာဌာနခွဲမှ ဒုတိ ယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစောထွန်းက ”ရဲဗလတံဆိပ်ရတဲ့ ပထမတစ် ယောက်က နွားထိုးကြီးမြို့နယ်မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ကပါ။ ရေတွင်းထဲ ပြုတ် ကျတဲ့ ပြည်သူ့လူထုတစ်ယောက် ကို ဆင်းပြီးဆယ်ကယ်တဲ့ ဒုတိယ မီးသတ်ဦးစီးမှူးပေါ့။ နောက်တစ် ယောက်က မော်လမြိုင်မြို့နယ် မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ကပါ။ သူလည်းရေ တွင်းထဲဆင်းကယ်ရင်းရတာ။ သူက တော့ တပ်ကြပ်ကြီး။ ရဲသူရိန်တစ်ဦး နဲ့ ရဲကျော်သူငါးဦးကတော့ မုံရွာမှာ အောင်စိုးမိုးကျော် ရေယာဉ်နစ် မြှုပ်တာ။ အဲဒီမှာသွားပြီးတော့ရှာ ဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေလုပ်ပေးလို့ စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တွေ ပေးတာပေါ့။ သူတို့ခြောက်ဦးက တော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ” ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၅ ရက် ကပြောသည်။
မီးငြှိမ်းသတ်ရာတွင် ပြည်သူ လူထုပူပေါင်းပါဝင်မှုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဆွေ က အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းတွင် မီး သတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ထည့်သွင်း မှာကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော် ဆွေက ”မီးလောင်ပြင်မှာ မီးသတ် သမားချည်းသက်သက်လုပ်ဆောင် တာထက် ပြည်သူလူထုပူးပေါင်း ပါဝင် ကူညီလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် ပိုမို အောင်မြင်တဲ့အတွက် ဒီလို အောင်မြင်မှုတွေကို ပြည်သူတွေသိ ရှိနားလည်အောင် ဆောင်ရွက်သွား ဖို့လိုအပ်တယ်” ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ တွင် သန္ဓေမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင် အား ၁၁၄၅၂ ဦး၊ အရန်မီးသတ် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၃ဝ၉၆၁၂ ဦး၊ သီးသန့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၈၆၇၂ ဦးရှိပြီး မီးသတ်ယာဉ်/ စက်ယန္တရားအင်အား ၃၂၉၅ စီး ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်၊ မီးသတ်သုတေသနနှင့်မီး ဘေးလုံခြုံရေးအသိပညာပေးရေး ဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကိုကိုစိုးက ”ဒီနေ့အခမ်းအနား ကတော့ ယူနီဖောင်းဝတ်အဖွဲ့အ စည်းတပ်ဖွဲ့အသွင်သဏ္ဌာန်နဲ့ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာ ကြောင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကို စစ်ရေးပြအခမ်းအနားနဲ့ ချီတက် အလေးပြုပြီးတော့ အင်အားပြတာ ပေါ့။ နောက်ျွငစ ငအ ဉ် ယှဉ်ပြိုင် ရင်းနဲ့ သရုပ်ပြတာပေါ့။ ပြီးတော့ မျှော်စင်မှာ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတကယ် မီးလောင်ပြင်မှာ မီးငြှိမ်းသတ်ရေး လုပ်ငန်းရော ကယ်ဆယ်ရေးလုပ် ငန်းပါလုပ်ရင် အဲဒီမှာ ယှဉ်ပြိုင်သွား တဲ့ နည်းပညာတွေ အကုန်သုံးရ တယ်။ အဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေကို ယှဉ် ပြိုင်တာပေါ့။ ဒီနှစ်ဘာတွေပြောင်း သွားလဲဆိုတော့ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း တွေလည်းပြောင်းလာတယ်။ ဟို အရင်ကလိုခေတ်မမီတာတွေ မရှိ တော့ဘူး။ နောက် ငလျင်ကလည်း ခဏခဏနှိုးဆော်နေတဲ့အတွက် မြန်မာတစ်ပြည်လုံး တပ်ခွဲအဆင့် ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေ လေ့ကျင့် နေကြတယ်” ဟု မီဒီယာများကိုပြော သည်။
ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်မှတ် တမ်းများအရ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ၃၆ ကြိမ်၊ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ၆၆ ကြိမ်နှင့် ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ ဧပြီ (လေးလတာ) အတွင်း ၆၉ ကြိမ် လှုပ်ခတ်ခဲ့သည်။
၁၉၄၆ ခုနှစ် မေ ၅ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ၁၉ ခရိုင်မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၉၇ ဦးတက်ရောက် သည့်ပထမအကြိမ် မီးသတ်အစည်း အရုံးညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပြီး ယင်း နေ့ကိုမြန်မာ နိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ကို စွဲချက်တင်ထားသည့် အမိန့်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် လျှောက်လဲချက် ပြည်နယ် တရ
စင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖခင်လောင်း ဝန်ထမ်းဖြစ်သူအား မီးဖွားခွင့်ကဲ့သို့ လစာပြည့်ဖြင့် ‘ဖခင်ခွ??
အီးစီးကရက် သောက်သုံးသူများ လေသင်တုန်း ဖြတ်နိုင်ခြေရှိကြောင်း အမေရိကန် သတိပေး